खेलकुदकाे बजेट कम, पछिल्लाे पाँच बर्षमा कस्ताे थियाे ? | | Neplays.com
खेलकुदकाे बजेट कम, पछिल्लाे पाँच बर्षमा कस्ताे थियाे ?
सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बार्षिक बजेट पेश गर्ने क्रममा यस्तो जानकारी दिए । पछिल्ला पाँच बर्षमा खेलकुदमा बिनियाेजन भएकाे बजेट यस्ताे थियाे ।
यो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा पेस गरेका थिए। यसको सबैभन्दा महत्पूर्ण निर्णय मूलपानी क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट निर्माण र ५३ निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण गर्ने भन्ने थियो।
बजेटमा भनिएको थियो, ‘क्रिकेट खेलमा हाल प्राप्त उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै यसको विकासका लागि आगामी वर्ष काठमाडौंको मूलपानीको क्रिकेट मैदानमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्यारिपिट लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। यसका लागि २० करोड विनियोजन गरको छु।’
तर, ०७१ सालपछि कतिवटा आर्थिक वर्ष गइसके, प्यारापिट बनेको छैन। प्यारापिटको कुरा छोडौं, मूलपानी मैदानभित्र रहेको घर पनि अहिलेसम्म हटाउन सकिएको छैन।
यो बजेट पनि अर्थमन्त्री डा. महतले ल्याएका थिए। यसमा खेलकुदलाई २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यो बजेटमा खेलाडीलाई बीमा गर्ने योजना थियो। तर मूलपानीको मैदानले भने निरन्तरता पाएन। एकै वर्षमा प्यारापिट बनाउने योजना थियो। तर सफल भएन । प्यारापिट बन्ने काम सुरु नै भएन।
यता धनगढी र देशका विभिन्न स्थानमा क्रिकेट मैदानको निर्माण गर्ने बजेट आयो। तर यो पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदानको अवधारणालाई भने निरन्तरता दिइएको थियो।
यो बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएका हुन्। नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट थियो त्यो, जसमा प्रदेशपिच्छे क्रिकेट मैदान बनाउने नीति थियो। त्यस्तै अघिल्लो सरकारले नै निरन्तरतामा राखेको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिने बाचा त्यसै सरकारले सुरु गरेको शैलीमा प्रस्तुत गरेको थियो।
यसमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस स्टेडियमको कुरा पनि गरिएको थियो। यो बजेटको आधारमा मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना थियो।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेल गराउनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बजेट छुट्याइएको थियो। तर पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन सकेन। अन्त्यमा प्रतियोगिता नै स्थगित गर्नुपर्यो। बजेट सार्थक बन्न सकेन।
खेलकुदमा यो बजेटले दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई परै छोडिदियो। कृष्णबहादुर महराले ल्याएको यो बजेटमा खेललाई २ अर्ब २४ करोड छुट्याइएको थियो।
यसले अघिल्लो बजेटको खेलाडी बीमाबारेको कुरा उठाएन। विद्यालय खेलकुदको योजना पनि ओझेलमा पर्यो। बरु राष्ट्यि र अन्तराष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन प्रेरित गरिने छ भन्ने वाक्यांश राखियो।
यसले मूलपानीको क्रिकेट मैदानको कुरा भने फेरि ब्युँतायो।
यो बजेट राजनीति गरेर मन्त्री भएका नेताको थिएन। राष्ट्यिर योजना आयोजका उपाध्यक्ष र गभर्नर भइसकेका डा. युवराज खतिवडाको थियो।
तर उनको बजेटमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण, १८ औं एसियाली खेलकुद र १३ औं दक्षिण एसियाली खेल बाहेक अन्य पक्षको उनले पूरै वेवास्ता गरिदिए। प्रदेशस्तरीय रंगशाला कस्तो हुन्छ बजेटले ब्याख्या गर्न सकेन।
पहिलेको बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने मूलपानी मैदान, देशका ८ ठाउँमा क्रिकेट मैदान, विद्यालय खेलकुद, खेलाडी प्रोत्साहन लागायतका कुरा यो बजेटको सीमामा पर्न सफल बनेनन्। हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस् स्टेडियमको कुरा महराकै बजेटमा परेको थिएन। यसमा पनि परेन।
मन्त्री खतिवडाको दोस्रो बजेट थियो यो। अघिल्लो खेल बजेटलाई सुधार गर्दै उनले दोस्रो पटक केही राम्रो बजेट ल्याए। बजेटमा खेललाई समुदायसँग जोड्नुपर्ने भन्दै सामुदायिक खेलकुद कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइयो थिए। क्रिकेट एकेडेमी स्थापना, फेरि एकपटक मुलपानीको मैदान बजेटमा समावेश भयो।
०७३ सालमा पनि तीन वर्षभित्र मूलपानी मैदान व्यवस्थित बनाउने भनिए पनि नबनेपछि यो बजेटले पुनः २ वर्षमै मैदान बनाउने भन्दै बजेट ल्याएको थियो। तर एक वर्ष वितिसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन।
३ अर्ब ९९ करोडको बजेटसँगै १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद पनि सम्पन्न भयो। तर यसबाहेक माथि भनिएजस्तो देशका ८ ठाउँमा क्रिकेट मैदान, विद्यालय खेलकुदले भने प्राथमिकता पाएनन।